musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Kunyanyisa Masking muHondo paDangerous Dining
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • dzidzo • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • Israel Breaking News • nhau • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Pane nzira dzinopfuura imwe dzekudya uine mask pa.
Kuchikoro chepuraimari mudunhu reWashington, USA, mukuru wechikoro akaudza vabereki kuti vaudze vana vavo kuti vanofanira kupfeka masiki pavanenge vachidya masikati muresitorendi - nguva yese yavanenge vachidya. Mune mamwe mazwi, tora forkful, dzikisa mask yako, tora kuruma, simudza mask yako, kutsenga, kumedza, dzokorora.
Mutemo wedunhu rechikoro pa COVID-19 chifukidzo chekupfeka unoti masiki haafanire kupfekwa uchidya.
Radio host Jason Rantz akaunza nhau idzi kuruzhinji kuburikidza ne AM redhiyo show paKTTH muSeattle.
Akagamuchira kopi yeemail yakatumirwa kuvabereki kubva kuna baba vane hanya iyo yaiti nguva yekudya kwemasikati inguva ine njodzi.
Tsambambozha kubva kumukuru wechikoro cheGiiger Montessori Elementary School muTacoma, Washington, VaNeil O'Brien yakatumirwa kuvabereki kuitira kuti ivandudzwe pamitemo yechikoro yeCOVID-19. Tsamba yacho yaiti: “Vana vanofanira kupfeka masiki panguva yekudya kwemasikati. Vanogona kuidzikisa kuti vatore kana kunwa, uye voisimudza kuti vatsvage, kumedza, kana kutaura. ”
Mukuru wechikoro akaenderera mberi nekutsanangura muemail kuti kunyangwe hazvo chikafu chekudyira chiine "inoyevedza mweya yekufambisa" uye vadzidzi vari munharaunda, "tinoda kutora nguva yemasikati senguva ine njodzi kune vese."
Zvinoenderana newebsite yeTacoma Public Schools, iyo Covid-19 mutemo unoti vadzidzi, vashandi, uye vashanyi "vanofanira kupfeka masiki mumba, kunze kwekudya."
Tacoma Veruzhinji Zvikoro zvakaburitsa chirevo chinotsanangudza kuti Madudziro aMukuru O'Brien enhungamiro yavo akapfuura zvinangwa. Chirevo chinoti:
“Chiyero chakamiswa pakutanga paGiiger chakagadzwa nekutendeka kwakanaka sedudziro yedhipatimendi rezvehutano rekupfeka mamask kana 'uchidya uchishingairira.' Mukutarisa nebazi rezvehutano, iwo mwero unopfuura zvinangwa zvavo. "Hatirayire chero vadzidzi kusapfeka mamask yavo pakarumwa."
Kwete Kekutanga Nguva Yekunyanyisa Kufukidza
Kudzoka muna Gumiguru 2020, Gavin Newsom, Gavhuna weCalifornia, akange atumira tweet nezvekudyira mumaresitorendi. Iye akati: “Kuenda kunodya nenhengo dzemhuri yako vhiki rino? Usakanganwa kuchengeta chifukidziro chako pakati pekurumwa. ”
Iye akatowedzera mufananidzo wekufananidzira wemusikana wechidiki achiisa pamask yake, achiibvisa kuti adye, uye achidzosera zvakare kuruma kwega kwega. Iyo tweet dhonza nekukurumidza ire nemhinduro dzakadaidza chirevo chaGavhuna kupusa.
Izvo zvakajekeswa nehurumende kuti kana uchidya mumaresitorendi, vanhu vanofanirwa kupfeka masiki avo asi kwete kana vachinyanya kudya nekumwa - kumwe kujekeserwa: kwete pakati pega chega chekuruma.
Mu Walks Zvemuchina
MuIsrael, kumeso kwakagadzirwa kunouya neremote control. Iyo inobvumira vanodya kuti vadye vasina kubvisa yavo masiki kure. Iyo maski inogona kuvhurwa neruoko kure michini kana iyo masiki inozvibata otomatiki painonzwa mudziyo uri padyo nekuvhurwa kwemask. Zvakakosha ndiamai vezvigadzirwa.